Yoma Land Commits to Accelerating Human Capital Development
Some member of Yoma Land’s project management teams had the chance to complete Project Management Professional @ Exam preparation program with Myanmar Project Management Centre.
The blended learning program was due to start in March 2020 but the classes were postponed due to Covid social distancing requirements, and finally resumed in May with fully online classes. The silver lining in the delay was that our employees had the chance learn not only the essential Project Management skills, but also learned online learning.
"It wasagreat day and got experience of Zoom Application. I gotachance how to operateaproject in other industry because my team members are working in different industry. The class is really useful for my career."
- Khin Kyay Ni Aye
"Fantastic! I leaned the additional items of Management process, teamwork and presentation."
- Khin Ei Ei Hlaing
"Project Management course and also online class is first for me. But I could do the best because of trainer Mr. David who is so active and attractive of learning style for the whole section and also supporting of class participants."
- Thaung Htike Soe
“This class is very special to me that I had learned about Project Management professionally. It's more broaden than I expected before. This class is very helpful and support me to step on the next level of my career and well efficient to my work."
- Wai Yan Htay
စီမံကိန်း စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သားများ Myanmar Project Management Center တွင် သင်တန်းတက်ရောက်
Myanmar Project Management Center တွင် Project Management Professional သင်တန်းကို တက်ရောက်ပြီးစီးခဲ့သည့် Yoma Land ရှိ စီမံကိန်း စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သားများ အားလုံးကို ဂုဏ်ပြုလိုပါသည်။ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် စနစ်တကျ ရေးဆွဲထားသည့် သင်တန်းအစီအစဉ်မှ စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် လိုအပ်သည့် အတတ်ပညာများကို သင်ယူခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းအစီအစဉ်ကို အွန်လိုင်းမှ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းကို ပထမဆုံးအဖွဲ့အနေဖြင့် တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တက်ရောက်ခဲ့သူများမှသင်တန်းအပေါ်ထားရှိသည့် ထင်မြင်သုံးသပ်ချက်များကို ဖော်ပြထားပါသည်။
“Zoom ကနေတစ်ဆင့် တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဒီသင်တန်းကနေ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အရာတွေကို သင်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ။ ကျွန်မရဲ့သင်တန်းအဖွဲ့သားများက အခြားလုပ်ငန်း ကဏ္ဍအစုံမှာ လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် အခြားလုပ်ငန်းတွေမှာ စီမံကိန်းတွေကို ဘယ်လို လည်ပတ်လုပ်ဆောင်ကြသလဲဆိုတာ သင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီသင်တန်းက ကျွန်မရဲ့အလုပ်အကိုင်တိုးတက်မှုလမ်းစဉ်အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။”
"အရမ်းကောင်းတဲ့သင်တန်းပါ။ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ၊ အသင်းလိုက်စုပေါင်းလုပ်ကိုင်တတ်ဖို့နှင့် တင်ပြပြောဆိုတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အများကြီးသင်ယူခဲ့ရပါတယ်။"
“ဒီ စီမံကိန်း စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းနဲ့ အွန်လိုင်းကနေ သင်ယူရတာတွေက ကျွန်တော့အတွက်တော့ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ Mr. David လို အရမ်း တက်ကြွပြီး အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ပြောဆိုဆွေးနွေးတဲံ သင်ကြားမှုပုံစံနဲ့ သင်ကြားတဲ့ဆရာကောင်းကြောင့် အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။”
“ဒီသင်တန်းကတေ ကျွန်တော် စီမံကိန်း စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ပညာရပ်တွေကို လေ့လာသင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ နောက်လျှောက်လှမ်းမယ့် အလုပ်အကိုင်ခရီးလမ်းအတွက် ဒီသင်တန်းက အများကြီး ကူညီထောက်ပံ့ ပေးနိုင်ပါတယ်။”